Kate 15 – NY VAVAKA (extrait) – FPMA Toulouse
Kate 15 – NY VAVAKA (extrait)
Hoy ny Tompo : “Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka tsy rera­ka” (Lio. 18 : 1). Manamafy izany i Paoly apostoly ka hoy izy : “Fa mivavaha man­drakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivava­hana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin’izany amin’ny faharetana” (Efes. 6: 18).
Fa inona moa no atao hoe vavaka ? Ary ny olona manao ahoana no mivavaka ?
Raha ny ntaolo malagasy no anontaniana dia ny fangataham-pitahiana amin’ny razana na izay lazainy hoe “Zanahary” no iheverany ny hoe vavaka.
Andriamanitra akaiky Andriamanitra (Imanoela): Sal.145:18. Amin’ny alalan’ny vavaka ni iresahan’ny olona amin’Andriamanitra.
Resaka mivantana ifanaovan’ny olon’ Andriamanitra aminy no atao hoe vavaka. Ny zavatra iray nitovizan’ny mpaminany rehetra ao amin’ny Baiboly, sy ny mpanompon’Andriamanitra rehetra nampiasainy teto amin izao tontolo izao dia ny fitiavam-bavaka. Mety ho samy hafa ny fiainan’izy ireo, ny tomba fiteniny, ny fotoana niasàny ho an’ny Tompo, fa ny fo tia vavaka kosa dia nitovizan’izy rehetra. Lazain’ny mpan­dinika ny Filazantsara fa ny teny hoe mivavaka sy ny hoe vavaka dia mihoatra in-25 no voalaza raha ny amin’i Kristy no dinihina.
Inona no anton’ny ivavahana ?
Misy antony maromaro mampirisika antsika hivavaka
1° Asa. 6:2-4 “Izahay kosa haharitra amin’ny fivavahana sy ny fampianarana”
Zava-dehibe tamin’ny Apostoly ny vavaka ary izay rehetra te-hanaraka ny dian’izy ireo dia tokony hiaina tahaka azy ireo koa.
2° Mar. 1:35: “Ary nifoha maraina alina koa izy (Jesoa), dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany”
Na dia ny Tompo aza rehefa nitafy nofo izy ka tonga olombelona dia hita tamin’ny fiainany ny fitiavany nivavaka ary nahatonga ny sasany aza hangataka taminy hoe “Tompoko, mampianara anay hivavaka”.
3° Efes. 6:12, 18 : “Fa isika tsy rnitolona amin’ny nofo aman-dra fa amin’ny fanapahana
sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra … Mifahara ary ka sikino famaharinana ny valahanareo … Ary mivavaha mandrakariva amin’ny Fanahy… »
Misy ny devoly na dia tsy inoan’ny olona maro aza izany. Ny kristiana dia manam­-pahavalo ary ny devoly no fahavalony (1Pet.5:8). Rehefa natoron’Andriamanitra azy ireo fiadiana samihafa dia nambarany fa ny fivavahana no hery ho enti-mampiasa ireo fiadiana rehetra ireo.
4° Heb.7:25 : “Koa amin’izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy satria velona mandrakizay hanao fifonana azy” ;
Ny vavaka dia isan’ny asa fanompoana goavana ary azo lazaina aza ho ny goavana indrindra ataon’ny Tompo eo ankavanan’ny Ray. Hoy i Paoly : “Iza no hiampanga ny olomboafidin’ Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jeso no efa maty, eny sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’ Andriamanitra ary mifona ho antsika”. (Rom. 8: 33-34). Koa ny fitia­vantsika mivavaka dia fiarahantsika manompo amin’i Kristy. Indrindra ny fitondrantsika ny hafa amin’ny vavaka.
5° Heb.4:16 : “Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’ny andro mahory”.
Mila famonjena lalandava isika raha mbola eto amin’izao tany izao koa. Hisy koa ny andro mahory. Tsy ny mitomany ny tenantsika fotsiny na ny mitoreo mitanondrika no haha­zoantsika fahasoavana sy famonjena fa ny “manatona ny seza fiandrianan’ny Ray amin’ny fahasahiana” izany hoe : sahy mivavaka.
6° Fil. 4:6-7 “Aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manam­bara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevi­trareo ao amin’i Kristy Jesosy”.
Feno fanahiana lalandava ny fon’ny olona amin’ny zavatra rehetra. Tian’ny Tompo anefa ny tsy hanahian’ny olona. Mba hahafaka izany dia atorony ny lalana : vavaka.
7° Jao. 16 :24b : “Mangataha dia hahazo anareo mba ho tanteraka ny fifalianareo”.
Mahadiso hevitra antsika ny tsy fandinihantsika ny Soratra Masina sy ny tsy faha­lalantsika marina an’i Kristy. Eto dia asehony miharihary fa irin’ny fony ny hahatanteraka ny fifaliantsika. Ny lalana atorony ahazoana izany anefa dia : vavaka ihany.
Heveriko fa ampy antsika ireo andinin­-tSoratra Masina ireo hampirisika antsika hivavaka. Raha nanatri-maso ny fifohazan-dehibe tany Kore ingahy Kurt Koch dia nanoratra boky milaza ny herin’ny vavaka any. Dia hoy izy : “Rehefa manampatra ny heriny i Satana dia tsy maintsy miara-mitolona amam-bavaka ny mpino”
Misy anefa angamba hiteny hoe : “mba mivavaka ihany izahay nefa tsy misy valiny”. Im­piry aho no nangataka ho afa-panadinana hoy ny sasany nefa tsy hitako izay teo. Tsy hivavaka intsony aho. Nivavaka mafy aho mba ho velona ny raiko hoy ny sasany nefa dia maty hany izy. Mety ho marina ary tena marina tokoa izany. Koa andeha hodinihintsika ‘ndrao misy mety ho anton’izany izay ambaran’ny Soratra Masina.
Ireo sakan-dalan’ny vavaka ambaran’ny Baiboly
1° Jak. 1: 6-7 : “Nefa aoka hangataka amin’ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory ; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany. Aoka tsy hanam­po handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany”.
Ny olona mangataka amin’ny Tompo nefa miahanahana fa tsy matoky ny teny fikasana efa nomeny dia mampandainga an’Andriamanitra. Ny tsy finoany no sakan-dalana ho an’ny vavaka ataony.
2° Jak.4:3: “Mangataka ianareo nefa sy mahazo ihany satria diso fangataka mba holaninareo amin’ny filanareo”.
Izay tian’ny Tompo holazaina amintsika dia ny tsy fankasitrahany ny vavaka tia tena fotsiny “holaninareo amin’ny filanareo”. Ny filana ao anatintsika no entintsika mangataka, mba hanankarena hoderain’ny olona ohatra ; mba ho afa-panadinana hahazoana mirehareha amin-dRanona ; mba holevonin’Andriamanitra ny fahavalo hahazoana milaza hoe: sakoa izay!… Vavaka tia tena fotsiny izany. Ary na dia ny fiangonana sy ny mpitory teny aza dia mety halaim-panahy te-halaza ka mangataka izany… “diso fangataka ianareo hoy ny Tompo, mba holaninareo amin’ny filanareo”. Tokony hanontany tena ary isika raha mivavaka hanao hoe : Inona moa no anton’ny angatahako izany?
3° Is.59:1-2: “Indro ny tanan’i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy laloda­lovana fa mahare ; fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino anareo izy”.
Mazava ho azy fa ny fahotana tsy nibebahantsika­ (ary iza moa no tsy manota ?) dia efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra, ary sakan-dalana ho an’ny vavaka ataontsika izany. Firfiry akory ny olona tsy mihevitra akory izay hibebaka amin’ny fahotany fa dia ny mangataka amin’Andriamanitra foana no ataony. Hahagaga ve raha tsy misy ny valim-bavaka?
4° Ezek.14 : 3: “Ry zanak’olona, ireto olona ireto efa nampiorina ny sampiny ao am-pony ary ny fahataflntohinana mahameloka azy dia ape­trany eo anoloany. Moa hety hanontanian’ireto va Aho” ?
Ny sampy ao am-po dia mahatonga ny Tompo tsy hihaino ny vavaka ataontsika. Ary ny atao hoe “sampy” dia izay zavatra rehetra na inona inona tianao mihoatra noho ny fitiavanao an’ Andriamanitra, eny na dia ny vady aman­-janakao aza, mainka moa fa ny harena izay mamatotra ny fon’ny maro tokoa ka ilay tovolahy mpanankarena izay mba nanatona ny Tompo aza dia toy izao no voasoratra ny aminy : “dia niala tamin’alahelo izy satria nanana fananana be” (Mat. 19 : 22). Koa raha tsy mivaly ny vavakao dia diniho ‘ndrao misy sampy ao am-­ponao no mahatonga izany.
5° Jao. 15 : 7: “Raha miray Amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ; dia angata­ho izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany”.
Raha tsy mivaly ny vavaka dia tokony hanontany tena isika hoe : moa tena miray marina amin’i Kristy va aho ? Moa ny Teniny tokoa ve no mitarika izao vavaka ataoko izao sa inona no fanorenako izay angatahiko ankehitriny na izay nangatahiko nefa tsy azoko ?
6° Mar.11:25: “Ary raha mitsangana mivavaka ianareo, ka misy olona anananareo ala­helo dia mamelà ny helony, mba havelan’ny Rainareo izay any an-danitra kosa ny helokareo”.
Efa hitantsika fa ny heloka dia efitra mampi­saraka amin’Andriamanitra (Is. 59 1-2). Raha mibebaka isika dia vonona hamela ny helotsika ny Ray, nefa raha tsy mamela ny heloky ny namantsika isika dia tsy hamela ny helotsika koa ny Tompo. Ary rehefa tsy mamela ny helotsika Izy dia mazava ho azy fa tsy hihaino ny vavaka izay ataontsika koa. Tandremo àry ny lolom-po amin­-dRanona sy Ranona, ny alahelo tehirizina : “Aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahate­zeranareo” hoy ny Tompo. Dia hoy ilay mpanompon’Andriamanitra iray: “Tara loatra izany : dimy minitra ihany dia tokony ho ampy!”
7° 1Pet.3:1,7 : “ Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataonan’ny fitondrate­nan’ny vavy izy na dia tsy amin’ny teny aza (raha tahiny misy tsy manaiky ny teny) … Ary toy izany koa ianareo lehilahy, miaraha mitoetra aminy araka ny marina, manajà ny vavy tahaka ny mety hatao amin’ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivava­hanareo”.
Firifiry ny tokantrano tsy mifanaraka anke­hitriny nefa anie ka samy mandeha am­-piangonana izao e, samy mandray kominio na fanasan ny Tompo izao na ny vavy na ny lahy. Tsarovy fa voasakana ny fivavahanareo hoy ny Tenin’ny Tompo raha misy tsy fifanarahana eo amin’ny mpivady.
Sasantsasany amin’izay sakan-dalam-­bavaka hita ao amin’ny Soratra Masina ihany ireo. Ampahafantarin’ny Tompo satria tom­pon’andraikitra eo anatrehan’Andriamanitra anie isika e. Maro no mangataka be fahatany amin’Andriamanitra ary dia ny Tompo no omeny tsiny raha vao tsy mahazo izay iriny izy. Raha mba mandinika ny Soratra Masina mantsy ireny olona ireny dia hisy fiovana tokoa ny fiainany ary hazava aminy ny sitrapon Andriamanitra.
Ny marina anefa dia manan-kery eo anatrehan’Andriamanitra ny vavaka
Nefa diniho ange : Raha mbola nivavaka i Abrahama dia tsy nandevona an’i Sodoma sy Gomora Andriamanitra !
Nivavaka i Elia dia nandatsaka afo avy any an-danitra Andriamanitra handevona ny fanatitra nataony ary dia niankohoka ny vahoaka rehetra tao Karmela. (Jak.5:17)
Nivavaka i Daniela dia nasehon’Andriamanitra azy ny zava-miafin’ny tantara ary na dia ny vavan’ny liona noana aza nikombona taminy. (Dan.6)
Nivavaka i Paoly sy i Silasy dia nihozongo­zona ny tranomaizina ka nivoha ny varavarana rehetra. (Asa.16:25ss)
Ny olona mahery amin’ny vavaka dia hahery koa amin’ny asa ampanaovin’ny Tompo azy satria Ilay Mahery no miara-miasa aminy. Hisinda tahaka ny zavon’ny maraina ny fahasahiranantsika raha mangataka izany amin’ny Anaran’i Jesoa isika mba ho voninahitry ny Ray. Mbola vonon-kihaino izay mivavaka Aminy amin’ny fo marina tahaka ny tamin’ny andron’ny Balboly ny Tompo : “NA INONA NA INONA ANGATAHINAREO AMIN’NY FIVAVAHANA DIA MINOA FA EFA NANDRAY IANAREO DIA HO TONGA IZANY” (Mar. 12: 24). Mbola marina ho antsika hatramin’izao ny teny fikasana hoe :
“RAHA NY OLONA IZAY NANTSOINA AMIN’NY ANARAKO HO AVY HANETRY TENA KA HIVAVAKA SY HITADY NY TAVAKO ARY HIALA AMIN’NY RATSY FANAONY DIA HIHAINO ANY AN-DANITRA AHO KA HAMELA NY HELONY ARY HAHASITRANA NY TANINY”. (2 Tant. 7 : 14).
Mila finoana ny vavaka: Jak.5-6; Mat.21:22